Baolina kitra - "CAN 2019" :: Miankina amin’ny lalao voalohany ny ho avin’ny Barea • AoRaha
Baolina kitra – « CAN 2019 » Miankina amin’ny lalao voalohany ny ho avin’ny Barea
Manana fanantenana. “Ny vokatry ny fihaonantsika amin’i Guinée, amin’ny 22 jona any Alexandrie, lalao voalohany eo amin’ny vondrona B misy antsika, no hamaritra ny tohin’ny fifaninanana ho an’ny Barean’i Madagasikara”, hoy i Franklin Andriamanarivo, mpanazatra mpanampy an’i Nicolas Dupuis.
Tontosa tamin’ny zoma alina lasa teo ny antsapaka nizarana ireo vondrona sy ny fandaharam-potoanan’ireo lalao rehetra hanamarika ny lalaom-bondrona eo amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019, hotanterahina any Ejypta amin’ny 21 jona hatramin’ny 19 jolay ho avy izao.
“Tena mety amintsika ny fandaharan-dalao amin’ity fifaninanana kaontinantaly ity. I Guinée sy Burundi mantsy no ekipa hahafahana mitady fandresena tsara amin’io vondrona misy antsika io. Ireo ekipa roa sy laharana fahatelo mendrika efatra no hiatrika ny ampahavalon-dalana. Noho izany, raha mandresy an’i Guinée isika dia efa mitongilana kely aty amintsika ny habetsaky ny herijika hiatrehana ny tohiny”, hoy hatrany izy.
Samy sambany hiatrika ny dingan’ny famaranan’ny CAN i Burundi sy Madagasikara. “Hilalao iray andro mialoha antsika i Nizeria sy Burundi. Amin’ny andro faharoa isika vao hihaona amin’ity ekipa mitovy vintana amintsika ity. Noho izany, dia azo heverina tsara ny mandresy azy ireo”, hoy hatrany izy.
“Mila manamafy ny firaisankina fotsiny isika ary manatsara ny fahaizana miaraka amin’ireo lalao ara-pirahalahiana roa (Luxembourg sy Mali). Nofoanana kosa ny lalao ara-pirahala­hiana saika hataontsika amin’i Kenya”, hoy hatrany izy.
Kitra – « THB Champions League » :: Mitovy isa ny Fosa Juniors, AS Adema Zanakala FC ary Cnaps Sport
Tsipy kanetibe :: Ligy folo eo ho eo mitsipaka ny fifaninanam-pirenena